Jamaahiirta Barcelona oo helaya War naxdin leh ee ku aadan Messi, kahor kulanka caawa ee Real Madrid – Gool FM
(Barcelona) 06 Feb 2019. Warbaahiinta Spain ayaa goordhow waxay sheegeen in tababare Ernesto Valverde uu go’aamiyay qorshihiisa kaga aadan Lionel Messi kulanka caawa ee El Clásico ay kooxda Real Madrid kula ciyaari doonaan garoonka Cump Nou.
Wargeyska “Cadena COPE” ee dalka Spain ayaa sheegay in Lionel Messi uusan ku soo bilaaban doonin kulanka caawa El Clásico-da ay la ciyaari doonaan Real Madrid, wuxuuna kasoo muuqan doonaa kursiga keydka.
Wargeyskan ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray in Sergi Roberto uu caawa kaga ciyaari doono qeybta dhexe shaxda tababare Valverde, halka Semedo uu ka ciyaari doono difaaca garabka midig.
Si kastaba Messi ayaa ku abuuray xaalad walaac ah taageerayaasha kooxda Barcelona, kadib dhaawacii kasoo gaaray kulankii horyaalka La Liga ay kula ciyaareen kooxda Valencia.
Messi ayaa kasoo muuqday tababarkii shalay ay kooxda Barcelona ugu diyaar garoobeesay kulankan El Clásico-da, balse waxaa wali kala cadeen in uu ku soo bilaaban doono iyo inkale shaxda kooxda Barcelona ee kulanka caawa ka dhici doono garoonka Cump Nou.